Talooyin ku saabsan xulashada ilaaliyaha shaashadda ee qalabka moobiilka | Ragga Stylish
Paco Maria Garcia | | nololeedka
Maanta dhammaanteen waxaan ku tiirsannahay, heer ama ka yarba, aaladaha moobilkeena. Taleefanka, kiniinka, iwm. Si kastaba ha noqotee, kama war qabno in qalabkani yahay aad ugu nugul xaaladaha maalinlaha ah iyo dhacdooyinka. Waa inaan isticmaalno ilaaliyeyaasha shaashadda.
ka shilalka suurtagalka ah kuwa badan baa jira. Qalabku wuxuu ku dhici karaa dhulka, wuxuu saaran yahay miis ay ka buuxaan waxyaabo kale oo xoqi kara, iwm.
Ilaaliyeyaasha shaashadu waxay ku bilowdeen sidii caag, muddo kadibna way ka soo baxeen qalabka kale, sida muraayadaha la adkeeyay iyo jel.
1 Keydinta shaashadda, xulashooyinka
2 Raadi tayo
3 Meelaynta ugu fiican
Keydinta shaashadda, xulashooyinka
ka ilaaliyayaasha jel Waxay bixiyaan difaac wanaagsan si loo yareeyo saameynta xagashada iyo sidoo kale jajabka shaashadda. Si kastaba ha noqotee, waxay leeyihiin dareen caag ah oo aan abuureynin dareenka ugu fiican ee ciyaarta. Intaa waxaa dheer, iyagu ma ahan kuwo raqiis ah.
Waqtigaan ilaaliyayaasha shaashadda muraayadda, badanaa. Waxay bixiyaan difaac aad u fiican oo ka dhan ah xagashada iyo jajabka shaashadda. Intaas waxaa sii dheer, waxay leeyihiin kharash dhexdhexaad ah.
Waa lagama maarmaan in aan u isticmaalno ilaaliyeyaal shaashad tayo leh aaladaha moobilkeena. Fikradda ayaa ah iska ilaali halista LCD-gaaga iyo taabashadaada, oo yaree khatarta jajabka ka soo baxa jugyada.
Hadaan isticmaalno ilaaliye tayo hooseeya, oo aan ku habboonayn qalabkeenna, ama aan ugu isticmaalno hab aan habboonayn, isla ilaaliyaha ayaa u keeni kara cillad qalabkeenna, burburka, iwm.
Meelaynta ugu fiican
Telefoonnadeenii ugu dambeeyay, Smartphone, iPhone, iwm, waa in lagu xisaabtamo taas waxaa jiri kara dareemayaal fara badan qalabka hore. Dareemayaashaan markasta ma sahlana in la arko, waxaa laga yaabaa in lagu xardho midab isku mid ah aaladda.
Guul darrooyinka dhici kara waxaa sababi doona gaashaanku wuxuu daboolayaa nalka iftiinka ama dhawaanshaha. Haddii tani dhacdo, nidaamyada rover-ka waxaa loogu talagalay in lagu ogaado walxaha meel fog, iyo Ilaaliyaha wuxuu sababi karaa shaashadda iyo furayaasha taabashada inay xirmaan.
Ilaha sawirka: Titicupon / Mercado Libre Colombia
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Baahida loo qabo ilaaliyeyaasha shaashadda moobiilka
La kulan Gala 2017 - Muuqaalka Ragga Ugu Fiican